पूर्ण आर्मर अफ गार्ड, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
आज, क्रिसमसमा हामी एफिससलाई लेखेको पत्रमा “परमेश्वरको हतियार” बोक्छौं। यसमा हाम्रो उद्धारकर्तालाई के गर्नुपर्दछ भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। पावलले यो पत्र रोमको जेलमा लेखेका थिए। उनी आफ्नो कमजोरीबारे सजग थिए र आफ्नो सारा भरोसा येशूमा राखे।
Ly अन्तमा: प्रभु र उहाँको शक्तिको शक्तिमा दृढ बन। परमेश्वरको हतियार तान्नुहोस् ताकि तपाईं शैतानको धूर्त आक्रमणहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ » (एफिसी २: १-6,10-१-11)
परमेश्वरको हतियार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पावलले तिनीहरूलाई र यसरी येशू आकर्षित गर्नुभयो। उसलाई थाहा थियो कि ऊ आफैले शैतानलाई जित्न सक्दैन। उसले यो कुनै पनि गर्नुपर्दैन, किनकि येशूले उसको लागि शैतानलाई हराइसक्नुभएको थियो।
«तर यी सबै बच्चाहरू मासु र रगत प्राणी भएकोले ऊ पनि मासु र रगतको मान्छे भएको छ। यसैले उसले आफ्नो शक्तिलाई मृत्युको सहायताले प्रयोग गर्न सक्छ, अर्थात् शैतानलाई। (हिब्रू १०:१२ नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
येशू पाप जस्तो बाहेक हामीजस्तै मानिस बन्नुभयो। हामी हरेक वर्ष येशू ख्रीष्टको अवतार मनाउँछौं। उनले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा हिंस्रक संघर्ष लडे। यस संघर्षमा येशू तपाईं र मेरो लागि मर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। बचेका मानिस विजेता जस्तो देखिन्थ्यो! "कति विजय भयो," शैतानले येशूलाई क्रूसमा मर्नु भएको देख्यो। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछि जब उसले महसुस गर्यो कि येशूले उसको सबै शक्ति खोसिसक्नु भएको छ भने उसको लागि कत्ति ठूलो हार भयो।
हतियारको पहिलो भाग
परमेश्वरको हतियारको पहिलो अ of्ग मिलेर बनेको छ सत्य, न्याय, शान्ति र विश्वास , तपाईं र मैले येशूमा यो सुरक्षा राखेका छौं र शैतानको धूर्त आक्रमणहरूको सामना गर्न सक्छौं। येशूमा हामी उसको प्रतिरोध गर्छौं र येशूले हामीलाई जीवन दिनुभयो। अब हामी यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्दछौं।
«त्यसैले यो अब निश्चित छ, आफ्नो कम्मरमा सत्यको साथ कम्मर कसे» (एफिसी २:१:6,14)।
हाम्रो बेल्ट सत्यको बनेको छ। को हो र सत्य के हो? येशू भन्नुहुन्छ « म सत्य हुँ! » (यूहन्ना १::)) पावल आफैले भने:
"त्यसैले म अब बाँच्दिन, तर ख्रीष्ट मभित्र बास गर्नुहुन्छ!" (गलाती २.२० सबैको लागि आशा)।
सत्य तपाईं मा बास गर्दछ र तपाईं येशू मा हुनुहुन्छ जो देखाउँदछ। येशूले तपाईंलाई सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ र तपाईंको कमजोरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नै गल्तीहरू याद गर्नुभयो। ख्रीष्टबिना तपाईं हराएको पापी बन्नुहुनेछ। तिनीहरूसँग परमेश्वर आफैंमा देखाउनको लागि केही राम्रो छैन। तपाईका सबै पापहरू उहाँलाई चिनिएका छन्। तपाईं पापी हुँदा उहाँ तपाईंको लागि मर्नुभयो। त्यो सत्यको एक पक्ष हो। अर्को पक्ष यो हो: येशूले तपाईंलाई यसको सबै कुनै न कुनै किनारमा प्रेम गर्नुहुन्छ।
सत्यको मूल प्रेम हो जुन परमेश्वरबाट आउँदछ!
न्यायको ट्या tank्क
Justice न्यायको ट्या tank्कसँग भयो » (एफिसी २:१:6,14)।
हाम्रो छातीचाहिँ ख्रीष्टको मृत्युद्वारा परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको धार्मिकता हो।
Him उहाँसँग मेरो यो गहिरो इच्छा हो (येशू) जडान हुन। यसैले म कानूनको आधारमा रहेको न्याय र मेरो आफ्नै प्रयासहरू मार्फत प्राप्त हुने न्यायको बारेमा अब जान्न चाहन्न। बरू मँ विश्वास गर्दछु कि ख्रीष्टमा विश्वास मार्फत हामीलाई दिइएको धार्मिकतामा - धार्मिकता जुन परमेश्वरबाट आउँदछ र विश्वासमा आधारित छ। (फिलिप्पी 3,9..XNUMX) (GNÜ))।
ख्रीष्ट तपाईंमा उहाँसँग धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईंले येशू ख्रीष्टमार्फत ईश्वरीय धार्मिकता प्राप्त गर्नुभयो। तपाईं उनको न्याय द्वारा सुरक्षित छन्। ख्रीष्टमा रमाउनुहोस्। उसले पाप, संसार र मृत्युलाई जितेको छ। भगवान सुरूदेखि नै थाहा थियो कि तपाईं यो एक्लै गर्न सक्नुहुन्न। येशूले मृत्युको सजाय लिनुभयो। उसको रगतले उसले सबै paidण चुक्ता गर्यो। तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको अघि धर्मी ठहरिन्छन्। तपाईंले ख्रीष्टलाई आकर्षित गर्नुभयो। उहाँको न्यायले तपाईंलाई शुद्ध र बलियो बनाउँदछ।
न्यायको मूल प्रेम हो जुन परमेश्वरबाट आउँदछ!
शूट बुट सन्देश
Le खुट्टामा बुटिएको, शान्तिको सुसमाचारको लागि खडा हुन तयार » (एफिसी २:१:6,14)।
सारा पृथ्वीको लागि परमेश्वरको दर्शन उहाँको शान्ति हो! करिब दुई हजार वर्ष पहिले, येशूको जन्ममा, यो सन्देश ठूलो संख्यामा स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरे: "सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र महिमा, र पृथ्वीमा शान्ति जुन उहाँमा रहन्छन्"। येशू, शान्तिका राजकुमार, उहाँ जहाँसुकै शान्ति ल्याउनुहुन्छ।
You मैले तपाईंसँग कुरा गरेको छु ताकि तपाईं ममा शान्ति पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं संसारमा डराउनुहुन्छ; तर विश्वस्त हुनुहोस्, मैले संसारलाई जितेको छु। (यूहन्ना १:16,33:१)
येशू तपाईंसँग उहाँको शान्तिमा बस्नुहुन्छ। ख्रीष्टमा विश्वासको माध्यमबाट तपाई ख्रीष्टमा शान्ति हुनुहुन्छ। तिनीहरू उहाँको शान्ति द्वारा बोकेका छन् र सबै मानिसमा उनको शान्ति बोक्छन्।
शान्तिको उत्पत्ति प्रेम हो जुन परमेश्वरबाट आउँदछ!
All सबै भन्दा बढि, विश्वासको ढाल लिनुहोस् » (एफिसी २:१:6,16)।
ढाल विश्वास बाट बनेको छ। दृढ विश्वास दुष्टताको सबै ज्वलन्त तीर निभाउँदछ।
His भित्री व्यक्तिको आफ्नो आत्माको साथ बलियो हुनको लागि, उहाँको महिमाको धनी पछि उहाँले तपाईंलाई शक्ति दिनुहुन्छ, कि विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तपाईंको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ र तपाईं जडित हुनुहुन्छ र प्रेममा आधारित हुनुहुन्छ। (एफिसी २: १-3,16-१-17)
ख्रीष्ट तपाईंको विश्वासको माध्यमबाट तपाईंको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। तपाईं येशू र उहाँको प्रेम मार्फत विश्वास छ। तिनीहरूको विश्वास, परमेश्वरको आत्माले काम गर्‍यो, दुष्टताको सबै अग्निबाणहरू निभाउँदछ।
«हामी बायाँ वा दायाँ हेर्न चाहँदैनौं, हामी केवल येशूलाई हेर्न चाहान्छौं। उहाँले हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ र हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न नसकेसम्म यसलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। किनभने ठूलो खुशी उहाँलाई पर्खिरहेका थिए, येशूले क्रूसमा अपमानजनक मृत्यु सहनुभयो » (हिब्रू १२:२:12,2 सबैका लागि आशा)।
विश्वासको मूल प्रेम हो जुन परमेश्वरबाट आउँदछ!
लडाईको लागि तयारीमा आर्मरको दोस्रो भाग
पावलले भने: "परमेश्वरका सारा कवच धारण गर्नुहोस्"।
«तसर्थ, भगवानले तपाईंको लागि तयार पार्नुभएको सबै हतियारहरू लिनुहोस्! त्यसोभए जब दिन आउँछ जब दुष्ट आक्रमणको बलहरू, तपाईं सशस्त्र हुनुहुन्छ र तिनीहरूसामु उभिन सक्नुहुन्छ। तपाईं सफलतापूर्वक लड्न र एक विजेता को रूप मा समाप्त हुनेछ » (एफिसियन २.6,13 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
हेलमेट र तरवार अन्तिम दुई टुक्रा उपकरणहरू हुन् जुन एक इसाईले लिनु पर्छ। एक रोमी सिपाहीले असहज हेलमेटलाई नजिकैको जोखिममा राख्छन्। अन्तमा उसले तरवार समात्छ, उसको एकमात्र आपत्तिजनक हतियार।
आउनुहोस् हामी आफूलाई पावलको गाह्रो अवस्थामा राखौं। प्रेरितहरूले उनको बारेमा र यरूशलेममा घटेका घटनाहरू, रोमीहरूद्वारा उनको पक्राउ र सिजरियामा उनको लामो नजरबन्दको बारेमा बृहत रूपमा वर्णन गर्दछन्। यहूदीहरूले उनको विरुद्धमा गम्भीर आरोप लगाए। पावलले सम्राटलाई अपील गरे र रोममा ल्याइए। उनी हिरासतमा छन् र शाही अदालतको अगाडि जिम्मेवारको लागि पर्खिरहेका छन्।
Salvation उद्धारको हेलमेट लिनुहोस् » (एफिसी २:१:6,17)।
हेलमेट मुक्तिको आशा हो। पावल यसमा लेख्छन्:
तर हामी, जो त्यस दिनका बच्चाहरू हौं, हामी सचेत हुन चाहन्छौं, विश्वास र प्रेमको हतियार र मुक्तिको लागि आशाको टोपले। किनकि भगवान्‌ले हामीलाई रिस उठाउने निधो गर्नुभएको छैन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत मुक्ति पाउनलाई निश्चय गर्नुभएको छ, कि हामी जागाौं वा सुते पनि हामी उहाँसँगै बस्न सक्छौं »१ थिस्सलोनिकी 1: -5,8-१० ,
मुक्तिको आशाबिना उनी सम्राटको अगाडि अवस्थित हुन सक्दैन भनेर पावललाई पूर्ण निश्चयता थियो। यो भाँडा जीवन र मृत्युको बारेमा थियो।
परमेश्वरको प्रेम मुक्तिको स्रोत हो।
"आत्माको तरवार, जो परमेश्वरको वचन हो" (एफिसी २:१:6,17)।
पावलले परमेश्वरको हतियारको अर्थ यसरी वर्णन गर्दछ: "आत्माको तरवार भनेको परमेश्वरको वचन हो"। परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्मा एकअर्कासित जोडिएको छ। परमेश्वरको वचन आत्मिक रूपमा प्रेरित छ। हामी केवल पवित्र आत्माको सहायताले केवल परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्दछौं। के यो परिभाषा सहि छ? हो, जब बाइबल अध्ययन र पढ्ने कुरा आउँछ।
यद्यपि, बाइबलको अध्ययन र पढ्नु भनेको आफ्नै लागि हतियार होइन।
यो एक स्पष्ट तरवार हो जुन पवित्र आत्माले विश्वासीलाई दिनुहुन्छ। आत्माको यो तरवारलाई परमेश्वरको वचनको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। शब्द "शब्द" "लोगो" बाट अनुवाद गरिएको छैन, तर "rhema" बाट। यो शब्दको अर्थ "परमेश्वरबाट भनेको", "भगवान के भन्नुहुन्छ" वा "भगवानको अभिव्यक्ति" हो। मैले यसलाई यसरी राखेको छु: “पवित्र आत्माले प्रेरणा र बोलेको वचन”। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई एक शब्द प्रकट गर्दछ वा यसलाई जीवित राख्नुहुन्छ। यो उच्चारण गरीन्छ र यसको प्रभाव हुन्छ। हामी बाइबलको अनुकुल अनुवाद पढ्छौं
यो यो जस्तै:
Spirit आत्माको तरवार, यो भगवानको भनाइ हो हरेक प्रार्थना र प्रार्थनामा हरेक आत्मामा प्रार्थना गरेर » (गलाती 6,17: -18-।)
आत्माको तरवार भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
बाइबल भनेको परमेश्वरको लिखित वचन हो। ती अध्ययनहरू इसाई जीवनको महत्वपूर्ण अंश हुन्। हामी यसबाट सिक्छौं कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ, विगतमा उहाँले के गर्नुभयो र भविष्यमा के गर्नुहुनेछ। प्रत्येक पुस्तकको एक लेखक हुन्छ। बाइबलका लेखक परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र शैतानको परीक्षा लिन, त्यसको प्रतिरोध गर्न र त्यसबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिन पृथ्वीमा आउनुभयो। आत्माले येशूलाई मरूभूमिमा डोर्यायो। उसले 40० दिनसम्म उपवास बसे र भोकाएको थियो।
"अनि परीक्षामा त्यो मानिस येशू कहाँ आयो र भन्यो," यदि तपाईं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, यी ढु stones्गाहरू रोटी बन्नू भनेर भन्नुहोस्। तर उनले भने, “यो लेखिएको छ (व्यवस्था::)): «मानिस रोटीबाट मात्र बाँच्दैन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्कने हरेक वचनबाट live (मत्ती १०: १ -4,3 -२०)
यहाँ हामी देख्छौं कि कसरी शैतानको उत्तरको रूपमा परमेश्वरको आत्माबाट येशूले यो वचन ग्रहण गर्नुभयो। यो कसले बाइबल सबैभन्दा राम्रो उद्धरण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छैन। No! यो सबै वा केहि छैन। शैतानले येशूको अधिकारमाथि प्रश्न उठायो। येशूले शैतानको सामु आफ्नो छोराको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्दैन। येशूले बप्तिस्मा पछि परमेश्वरबाट गवाही प्राप्त गर्नुभयो: "यो मेरो प्यारो छोरो हो, जसको म आनन्द लिन्छु"।
यो शब्द प्रार्थनामा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित र उच्चारण गरीएको हो
पावलले एफिसीहरूलाई परमेश्वरको आत्माले प्रेरित प्रार्थना गर्न आग्रह गरे।
«जहिले पनि आत्माको बिन्ती र अन्तरबिन्तीका साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र सबै सन्तहरूका लागि प्रार्थनामा पूर्ण दृढताका साथ यसको निरीक्षण गर्नुहोस्» (एफिसियन २.6,18 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।
"प्रार्थना" र "प्रार्थना" को शव्दको रूपमा म "परमेश्वरसँग कुरा गर्न" रुचाउँछु। म सधैं परमेश्वरसँग बोल्दछु शब्दहरू र विचारहरूमा। आत्मामा प्रार्थना गर्नुको अर्थ हो: God म ईश्वरलाई हेरेँ र मैले उनलाई के भन्नु पर्छ र प्राप्त गर्छु। यो कुरा आत्माको प्रेरणाबाट भएको परमेश्वरसँग कुरा गरिरहेको छ। म ईश्वरको काममा भाग लिन्छु, जहाँ उहाँ पहिले नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। पावलले आफ्ना पाठकहरूलाई परमेश्वरसँग सबै संतहरूको लागि मात्र नभएर विशेष गरी उहाँसँग बोल्न आग्रह गरे।
«र मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् (पावल) कि जब म आफ्नो मुख खोल्दछु म सुसमाचारको रहस्यको प्रचार गर्न खोल्दछु, जुन सन्देशवाहक म साins्गलामा रहेकोछु, म कसरी स्पष्ट पार्छु भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्छ। (एफिसी २: १-6,19-१-20)
यहाँ पावलले आफ्नो सबै महत्त्वपूर्ण कामको लागि सबै विश्वासीहरूको सहयोगको लागि आग्रह गर्दछन्। यस पाठमा उसले "स्पष्ट र स्पष्ट" प्रयोग गर्दछ र स्पष्टतः सम्राटसँग वार्ता गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। उसलाई सही शब्दहरू, सही हतियारको आवश्यकता पर्‍यो जुन परमेश्वरले उनलाई भन्नुभएको थियो। प्रार्थना यो हतियार हो। यो तपाईं र भगवान बीचको संचार हो। वास्तविक गहिरो सम्बन्धको आधार। पावलको व्यक्तिगत प्रार्थना:
"हे बुबा, उनीहरूलाई तपाईको आत्माले दिने शक्ति दिनुहोस्, तपाईंको महिमाको धनबाट र उनीहरूलाई आन्तरिक बल दिनुहोस्। तिनीहरूको विश्वासको कारण, येशू उनीहरूको हृदयहरूमा बस्नुहुन्छ! तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक प्रेमको जरा हुन दिनुहोस् र उनीहरूमा आफ्नो जीवन निर्माण गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले आफ्ना सबै भाइबहिनीहरूसँगै, बुझ्न सके कि अकल्पनीय रूपमा ठूला र फराकिलो, ख्रीष्टको प्रेम कत्ति अग्लो र कत्तिको गहिरो छ भन्ने कुरा कल्पना गर्नभन्दा टाढा छ। बुबा, तपाईंको सबै महिमाले उनलाई भर्नुहोस्! परमेश्वर, जसले हामीलाई कहिल्यै माग्न वा सोच्न पनि सक्नुहुन्न हामीलाई अनगिन्ती मात्रा गर्न सक्नुहुन्छ - हामीमा काम गर्ने शक्ति यति महान् छ - कि यो महिमा चर्चमा छ र येशू ख्रीष्टमा सबै पुस्ताका लागि। सबै अनन्तसम्म। आमिन। » (एफिसी 3,17: १ 21-२१ बाइबल अनुवाद home घरमा स्वागत छ »)
परमेश्वरको वचन बोल्नु भनेको प्रेमबाट आउँदछ जुन परमेश्वरबाट आउँदछ!
अन्तमा, म तपाईंसँग निम्न विचारहरू साझा गर्दछु:
एफिससलाई पत्र लेख्दा पावल पक्कै पनि रोमी सिपाहीको मनमा थिए। एक लेखकको रूपमा, उनी मसीहको आगमनको बारेमा गरेका भविष्यवाणीहरूसँग धेरै परिचित थिए। मसीह आफैले यो कवच लगाएका थिए!
«उहाँ त्यहाँ कोही पनि थिएनन् र यो देखेर छक्क परे कि कोहीले पनि परमेश्वरसामु प्रार्थना गर्न बिन्ती गरेन। यसैले उसको पाखुराले उसलाई मद्दत गर्यो र उसको न्यायले उसलाई सहयोग गर्यो। उनले न्यायलाई ट्या a्कमा राखे र मुक्तिको टोप लगाए। उनले आफैंलाई बदलामा लपेटे र आफ्नो जोसको पोसाकले आफूलाई कभर गरे। तर सियोन र याकूबका मानिसहरूका लागि जो पापबाट फर्किए, उहाँ एक उद्धारकर्ताको रूपमा आउनुहुन्छ। तब परमप्रभुले आफ्नो वचन दिनुहुन्छ। (यशैया::: १-59,16-१-17 र सबैका लागि २० आशा)
परमेश्वरका मानिसहरूले मसीह, अभिषिक्त जनहरूको आशा गरे। उहाँ बेतलेहेममा बच्चा जन्मनुभएको थियो, तर संसारले उहाँलाई चिनेन।
«ऊ उसको सम्पत्ती भयो र उसको परिवारले उनलाई स्वीकारेन। तर कतिले उसलाई ग्रहण गरे तर उनले परमेश्वरको बालक हुने अधिकार देखाए। (यूहन्ना .1,11..12-)
हाम्रो आध्यात्मिक संघर्षको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार येशू हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको वचन, मसीह, अभिषेक गरिएको, शान्तिका राजकुमार, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता हाम्रो उद्धारकर्ता।
के तपाईंले उसलाई चिन्नुभएको छ? के तपाईं उसलाई आफ्नो जीवनमा थप प्रभाव दिन चाहानुहुन्छ? के तपाइँसँग यस शीर्षकमा कुनै प्रश्नहरू छन्? WKG स्विजरल्याण्ड नेतृत्व तपाइँको सेवा गर्न खुशी छ।
येशू अब हाम्रो बीचमा बस्नुहुन्छ, तपाईंलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ र तपाईंलाई पवित्र पार्नुहुन्छ, उहाँ शक्ति र महिमाको साथ फर्केर आउँदा तयार हुनको लागि।